समाचार Archives - Page 254 of 324 -
दुवै प्रहरीमा नयाँ नेतृत्व, कसरी भयो छनोट?
काठमाडौं, २८ चैत । सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा नयाँ नेतृत्व छनोट गरेको छ। बालुवाटारमा मंगलबार सा“झ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) मा सर्वेन्द्र खनाल र सशस्त्रमा शैलेन्द्र खनाललाई बढुवा गरेको हो। गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा खनालद्वयलाई बिहीबारदेखि लागू हुने गरी प्रहरी नायब म...
नेपाल प्रहरीमा ठुलाे झट्का अार्इजिपीका दावेदार रमेश खरेलद्वारा राजीनामाको घोषणा
काठमाडौं | सरकारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकमा सर्वेन्द्र खनाललाई नियुक्त गरेलगत्तै सहब्याची रमेश खरेलले राजीनामाको घोषणा गरेका छन् । संक्षिप्त कुराकानीकाे अाधारमा नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा तपाईंको पनि दाबेदारी थियो, सहब्याची सर्वेन्द्र खनालले यो जिम्मेवारी पाउनुभएको छ, तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ? आइजिपीमा नियु...
प्रहरीको नयाँ आइजिपीमा सर्वेन्द्र खनाल, सशस्त्रमा शैलेन्द्र खनाल
काठमाडौं । मंगलबार साँझ बसेकाे मन्त्रिपरिषद्काे बैठकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल दुवै प्रहरी संगठनकाे अार्इजिपी नियुक्ती बारे निर्णय गरेकाे छ । सरकारले नेपाल प्रहरीकाे अार्इजिपीमा सर्वेन्द्र खनाल र सशस्त्र प्रहरीकाे अार्इजिपीमा शैलेन्द्र खनाललार्इ नियुक्त गरेकाे छ। सरकारले बरियताका आधारमा नेपाल प्रहरी र सशस्त...
दुवै प्रहरी संगठनका अाइजिपीसहित तीस उच्च प्रहरी अधिकृत भाेली एकैसाथ अवकाश पाउँदै, काे-काे पाउँदैछन अवकाश(नामसहित)
काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका दुवै आइजिपीसहित ३० उच्च प्रहरी अधिकृतहरुले भाेली बुधबार एकैसाथ अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्। प्रहरी नियमावलीनुसार उनीहरु उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका हुन्। ३० वर्षे सेवा हदका कारण एकै दिन ठूलो संख्यामा प्रहरी अधिकृतहरु अवकाश पाउन भएका छन्। नेपाल प्रहरीका महानिरी...
अाईजीपी बढुवा सिफारीस समितिको बैठक बस्दै, नेपाल प्रहरीकाे अाईजीपीमा तीन जनाकाे दाैड
काठमाडौं । अाईजीपी बढुवाका लागि बढुवा सिफारीस समितिको बैठक बस्न लागेकाे स्राेतले बताएकाे छ। भाेली बुधबारदेखि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका दुवै महानिरीक्षक(अाईजीपी) उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउन लागेकाेले नयाँ अाईजीपी नियुक्तिका लागि गृह मन्त्रालयले साेमबार देखिनै प्रक्रिया अघि बढाएर अाज अन्तिम रुप दिन बैठक बस्...
काठमाडौँ । आम्दनी र श्रम सुरक्षाका दृष्टिकोणले आकर्षक मानिएको दक्षिण कोरियामा नर्सलगायतका दक्ष प्राविधिक कामदार पठाउन सरकारले पहल अगाडि बढाएको छ। रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएस अन्तर्गत नेपालबाट अदक्ष कामदारको माग बढाउँदै लगेको कोरियाले दक्ष कामदारको रुपमा नेपाली नर्सलाई लैजान सकिने संकेत गरेपछि सरकारले पहल अघि बढाएको ...
राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिँदै हिमाली जिल्ला डोल्पा
डोल्पा । हिमाली जिल्ला डोल्पा खण्ड-खण्डमा राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिँदै छ। जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका-५ मा पर्ने खदाङसम्म राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको छ। नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको जाजरकोट-डोल्पा सडकखण्डअन्तर्गत डोल्पा-रुकुम सिमाना त्रिवेणी बजारदेखि खदाङसम्मको ९ किमि सडकखण्ड सुचारु भइसकेको छ। सेनाका अनुस...
काठमाडौं । भूमाफिया र बिचौलियाको मिलेमतोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नाममा नक्कली निर्णय र चिठी तयार भएको तथ्य फेला परेको छ। गोप्य रूपमा तयार पारिएका त्यस्ता नक्कली लेटरप्याड, छाप र हस्ताक्षरसहितका निर्णय र चिठी कब्जामा लिएर अख्तियारले प्रहरीको जिम्मा लगाएपछि बिचौलिया गिरोहको रहस्य खुलेको हो। राजधानीको केन्...
मालपोत र नापी कार्यालयबाट ६ जना बिचौलिया पक्राउ
कास्की । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई दुख दिने ६ जना दलाली र बिचौलिया पक्राउ गरेको छ । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नंम्वर ६ फिर्केस्थित मालपोत कार्यालय वरपर बसेर केही व्यक्तिहरुले कार्यालयबाट हुने दैनिक कामकाजमा सजिलो पारिदिन्छु भन्दै सेवाग्राहीलाई भ्रममा पारेर मोलमो...
सरकारी लक्ष्य समृद्धि, समृद्धिको बाधक दुर्व्यसनी !
जुम्ला । विकास र समृद्धिकाे अपेक्षा गरिरहदा पहिला व्यक्ति, समुदाय तथा गाउँकाे स्तरमा बृद्धि हुनु अपरिहार्य आवश्यकता छ । जहाँ शिक्षा, रोजगारी, उद्यमशिलता तथा मेलमिलाप छैन् त्यहाँ समृद्धिको परिकल्पना गर्न सकिदैन । राष्ट्रले जसलाई समाज समृद्धिको मुल खम्बा मानेकाे छ तिनै युवा जनशक्ति स्वदेशमै उद्यमशिल बन्न नसक्दा लाखौँको ...